Ny kitapo fitsapana COVID-19 sasany dia nankatoavin'ny FDA mba hanangona santionany ao an-trano
Tamin'ny 21 aprily, LabCorp, orinasa iray momba ny siansa momba ny fiainana, dia nanambara tao amin'ny tranokalany ofisialy fa nahazo ny fahazoan-dàlana amin'ny fampiasana vonjy taitra FDA ho an'ny kitapo fitsapana Novel Coronavirus azo alaina ao an-trano.
Ny Kit Test AT-Home, izay azo ampiasaina amin'ny fanangonana santionany amin'ny fitsapana ao an-trano, dia ahafahan'ny olona mandefa santionany amin'ny nasal swab any amin'ny laboratoara ao amin'ny orinasa hanaovana fitiliana.
Ny kitapom-panadinana LabCorp dia nomena alalana FDA maika tamin'ny volana martsa, ary tamin'ny 5 aprily, LabCorp dia nifandray tamin'ny FDA mba hangataka fanovana ahafahan'ny marary mampiasa ny kitapo fitsapana ao an-trano, hoy ny CNBC.
Nilaza i LabCorp fa efa manana kitapo 60,000 ao an-trano izay homena laharam-pahamehana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ary antenaina hiitatra amin'ny mpanjifa amerikana hafa amin'ny herinandro ho avy.
Ny kitapo dia mitentina $119, mitaky ny fanombanana ny mpampiasa fa mety sy mameno fanontaniana ao amin'ny tranokalan'ny LabCorp, hoy i LabCorp.
Notaterin'ny Reuters fa niezaka nanatsara ny fahaiza-manao fitiliana i Etazonia, saingy voasakana izany fanitarana izany noho ny tsy fahampian'ny matihanina sy ny fitaovam-piarovana manokana mba hiantohana ny fiarovana.
Ny fanangonana santionany ao an-trano dia hampihena ny mety hifindran'ny viriosy amin'ny mpiasan'ny fahasalamana, saingy mety hisy ny tsy fahampiana, toy ny hoe nanangona tsara ny santionany ny mpanandrana ary nandefa azy ireo soa aman-tsara tany amin'ny laboratoara.
Nilaza ny FDA fa niara-niasa tamin'ny LabCorp izy ireo mba hahazoana antoka fa ny angon-drakitra ao amin'ny kitapo fanangonana santionany dia azo antoka sy marina, satria any amin'ny hopitaly na toeram-pitsapana hafa.
Nilaza ny LabCorp fa tsy hisy fahasamihafana eo amin'ny kalitao na ny vokatra eo amin'ny santionany nalain'ny marary sy ny nalain'ny matihanina, raha toa ka arahina ny torolalan'ny kitapo. Ny kitapo ao an-trano dia miaraka amin'ny swab landihazo izay azo ampiasaina hanangonana santionany amin'ny orona, ary koa ny kitapo biohazard ary ny kitapo fandefasana fedex mandritra ny alina handefasana santionany any amin'ny laboratoara. Ny laboratoara dia afaka mahazo ny valiny ao anatin'ny iray na roa andro aorian'ny nandraisany ny santionany.
Realytech dia orinasa manokana amin'ny famokarana reagents fitiliana ara-pitsaboana isan-karazany. Nankatoavin'ny FDA izahay ary ao anatin'ny lisitra fotsy momba ny fisorohana ny coronavirus vaovao 2020
Izahay koa dia mpamatsy reagent fitiliana haingana amin'ny fitaovana fisorohana ny valan'aretina nomen'i Jack Ma ho an'i Japon sy Eropa tamin'ny 2020
NY Fitsapana haingana 2019-NCOV IgGIgM manana fahitsiana avo lenta sy vidiny ambany, tongasoa ny governemanta sy ny toeram-pitsaboana mba hifampidinika
Fotoana fandefasana: Jul-14-2020